Aiza no hanombohana ny fampielezan-kevitro SEO hatrany am-piandohana?
Maro ireo fomba sy algorithm isan-karazany amin'ny fanomezana mari-pahaizana amin'ny aterineto ao amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana ampiasain'ny Google, ary koa ireo tolotra hafa malaza toa an'i Yahoo sy Bing. Raha ny endriky ny sehatry ny fikarakarana ny goavambe, dia mitazam-pahaizana amin'ny algorithm tsara fitandremana izy, izay mbola tsy navoaka na farafaharatsiny ampahany amin'ny mpiasany. Raha jerena ny fikarohana lehibe, ny fisedrana azo tsapain-tanana sy ny tsikombakomba hita avy amin'ireo mpiasan'ny mpikambana taloha, izay fantatsika hatramin'izao - ny algorithm amin'ny algorithm ao amin'ny Google dia ahitana zavatra iray momba ny 200 karazana fikarohana, indrindra indrindra tarihan'ny traikefa amin'ny traikefa, ny lojikan'ny mpikaroka amin'ny fikandrana tsara kokoa - blue book big rigs.
Raha toa ka tsy misy drafitra an-tsakany na fomba iray hanatanterahana ny fizotry ny fikarohana Google, dia misy tetik'asa mahafa-po sy manerana ny manodidina ny fanatsarana ny tranonkala. Ankehitriny dia fantatra amin'ny hoe Search Engine Optimization (SEO). Ny teny dia midika hoe manao ny zava-drehetra manodidina ny lasibatra tokana - miakatra eny an-tampon'ny lisitry ny pejy valin'ny motera (a. K. ny. SERPs). Ny SEO dia tena fantatra amin'ny asa mavesatra sy maharitra ataony mba handraisana tranonkala marim-pototra tanteraka - izay mahasoa sy mihoatra noho ny mavitrika ho an'ny mpitsidika rehetra, ary koa ny traikefa iainana mitazona am-pilaminana, mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra pejy madio sy mamiratra dia ankafizo amin'ny boot crawling search.
Ary mety ho voamarikao angamba ilay hevitra. Midika fotsiny aho fa mora lazaina fa tsy vita izany. antoka. Saingy, na izany aza, inona no azontsika atao momba ny fampiroboroboana ny SEO ao amin'ny tranokalanao, farafaharatsiny hanomboka hizotra amin'ny làlana marina? Andao hojerentsika fohy ny toerana ahafahantsika manatsara ny tranonkalanareo miaraka amin'ny SEO. Amin'ity indray mitoraka ity dia hanomboka amin'ny fototra sasantsasany aminareo izahay.
Eritrereto ny votoatinao tahaka ny hoe miresaka amin'ny olona velona ianao ary mitadidy fa ny pejy web-nao dia mety ho hita amin'ny tena mpampiasa, ary ny milina fikarohana amin'ny alàlan'ny teny fanalahidy na fehezanteny manan-danja. Amin'izany dia manjary sarotra kokoa ny manoratra votoaty toy izay mety ho voalohany. Mila hery be dia be ny fitadiavana fikarohana tsara, mamorona asa soratra manan-danja amin'ny fehezan-teny manan-danja manan-danja, mbola mibanjina voajanahary sy mahasoa ho an'ny famakiana, fa manome tombam-bidy lehibe amin'ny fotoana iray ihany. Eritrereto fotsiny izany. Angamba mety hampiasa manam-pahaizana manokana ho an'ny fanampiana ianao. Ho fanapahan-kevitra tsara izany.
Links sy Social Media
Ny fananganana ny rohy dia mety ho singa manan-danja indrindra amin'ny lahasa SEO rehetra. Raha ny marina dia miasa tsotra izao izy - mikaroka ny rohy rehetra i Google, sady manondro ny pejinao ary manalavitra ny tranokalanao. Saingy ny resaka momba ny fifandraisana tsara sy ny fifandraisana tsara amin'ny Media Social dia mbola tena miady hevitra. Samy manana ny lanjany sy ny kalitao izy ireo. Sa tsy izany? Tokony ho voajanahary sy voajanahary daholo ve ny rohinao rehetra? Ahoana raha mampiasa sora-tanana sasantsasany isika na mangataka rindran-kaonty amin'ny antsinjarany? Na inona na inona fanapahan-kevitrao momba izany, nefa mino aho fa ny fanararaotana na ny fanodikodinana azy ireo dia hiafara amin'ny toerana ambany kokoa ao amin'ny SERP, ka mahatonga ny ezaka rehetra ataontsika eo amin'ny sehatra SEO fampiroboroboana mora foana.